'၀' သတင်း (1)
BI မွန်းတည်နေသတင်း (1)
HIV သတင်း (1)
IS အဖွဲ့ရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှုများ (6)
KIA သတင်း (16)
KNU သတင်း (5)
Miss Myanmar သတင်း (9)
NDF သတင်း (1)
NLD သတင်း (4)
ooredoo သတင်း (6)
PR စနစ် (2)
ဗဟုသုတ အသိပညာလေးများ (3)
ဘ၀အတွက် သိမှတ်ဖွယ်ရာစာစုလေးများ (4)
မွတ်ဆလင် အမျိုးယုတ်၏ ယုတ်မာရက်စက်မှုများ (1)
ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံတကာအကျော်အမော်များ (2)
နိုင်ငံတကာ အတွင်းရေး (3)
ဒုတိယ မိုးဟေကို ဆိုတဲ့ နန်မြင့်မိုရ် အပြီး ဒီတစ်ခါ...
ကြိုးတုတ်ပြီး နှိပ်စက်နေတာ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကောင်မေ...
6:00 PM ထူးခြားဆန်းပြားသတင်း No comments
မိကျောင်းလူသား ဆိုတာ မိချောင်းတစ်ပိုင်း လူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေသူပါ။ အစကတော့ တကယ်မဟုတ်ပဲ ဒဏ္ဍာရီသဖွယ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ၁၉၆၇ တစ်ဝိုက်က ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရှာဖွေသူတွေဖြစ်တဲ့ Marian နဲ့ Junior Marsh တို့နှစ်ဦးဟာ ကမ်းခြေတစ်လျှောက်စုံစမ်းရာကနေ ဒီမိကျောင်းလူသား မံမီကို ရွာတစ်ရွာရဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင် တစ်ဆိုင်ကနေ တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် ဒေါ်လာ ၇၅၀ နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ရောင်းသူကတော့ ဖလောရီဒါရွှံ့နုံးမြေတစ်ခုထဲကနေ ဒီမိကျောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုတော့ ဂျိတ်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီ မိကျောင်းလူသားမံမမီကို ၀ါရှင်တန်က Marsh's Free Museum မှာပြသထားပါတယ်။ ဒီပြတိုက်မှာ အထူးအဆန်းပစ္စည်းမြောက်များစွာကို ပြသထားပြီး နေ့စဉ်လူပေါင်းများစွာ လာရောက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါတယ်။ ‪
3:30 PM ကျန်းမာရေးအသိပညာ No comments
တကယ်လို့သင်မှာ ချစ်သူ၊ စုံတွဲတစ်ယောက်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် သင်ပျော်ရွှင်မှုတွေကို တစ်ပတ်တစ်ခါပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်များသွားရင်တော့ သင်ထပ်မံပျော်ရွှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ သုတေသနတစ်ခုကဆိုပါတယ်။သင့်မှာပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးမရှိနိုင်ပါဘူး။ ကာမဆက်ဆံတာဟာ သင့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ လေ့လာချက်တွေအရ စုံတွဲတွေဟာ သူတို့ဆက်ဆံရေးမှာ ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖို့နဲ့ ပိုအဆင်ပြေဖို့ အလိုရှိကြပါတယ်။ တချို့လူငယ်တွေကတော့ ဒီလိုကာမကိစ္စတွေမှာ တက်ကြွတတ်တာမို့ ဘယ်လောက်ပဲ ဆက်ဆံဆက်ဆံ ပျော်ရွှင်မှုအတိုင်းအတာက ပိုမလာနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လူမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းက ပုံမှန်ကာမဆက်ဆံပျော်ရွှင်တဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး သုံးသောင်းကို ၁၉၈၉ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း လေ့လာချက်တွေအရ အကောင်းဆုံး ပျော်ရွှင်ဖို့အကြိမ်ရေဟာ တစ်ပတ်တစ်ခါပဲဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လေ့လာမှုက စုံတွဲတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံရင်ပျော်တတ်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထက် ပိုပြုလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ သူတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာ ထပ်တိုးမလာတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်စည်းမျဉ်းဟာ အသက်၊ လိင် ဒါမှမဟုတ် အချစ်ရေးအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ သုတေသနရဲ့ တွေ့ရှိချက်မှာတော့ ကာမဆက်ဆံရေးပျော်ရွှင်မှုဟာ သူတို့အနေနဲ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့လည်း ဆက်စပ်မှုမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။"ကာမဆက်ဆံရေးမှာ အကြိမ်ရေပေါ်မူတည်ပြီး အကျိုးအမြတ် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး" လို့ သုတေသနကိုဦးဆောင်ခဲ့သူ Amy Muise ကဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ တခြားလေ့လာမှုတစ်ရပ်မှာတော့ ယောက်ျားတွေဟာ ကာမဆက်ဆံမှုတောင့်တချက်က မိန်းမတွေထက်မြင့်မားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီသုတေသနကလည်း တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ကာမဆက်ဆံတာဟာ ပျော်ရွှင်မှုကိုထပ်မံမဖြစ်စေဘူးလို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုက ကာမဆက်ဆံခြင်းရဲ့ အရည်အချင်းကိုမကြည့်ပေမယ့် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ဆက်ဆံရေးဟာ စုံတွဲတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တွေကို ခံစားရစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။စုံတွဲတွေအနေနဲ့ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ကာမဆက်ဆံခြင်းဟာ ပျမ်းမျှပမာဏ တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်လည်း တကယ်လို့ ကလေးလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီပမာဏဟာ အကောင်းဆုံးအကြိမ်ရေပမာဏမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ (Blue Lion) #သစ်ထူးလွင်(ကျန်းမာရေး) #health.thithtoolwin.com Ref: The Guardian
ကြိုးတုတ်ပြီး နှိပ်စက်နေတာ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကောင်မလေး
1:50 PM 18+ No comments
ဒုတိယ မိုးဟေကို ဆိုတဲ့ နန်မြင့်မိုရ် အပြီး ဒီတစ်ခါ နန်းဝေေ၀ထွန်း တဲ့
1:38 PM 18+ No comments
အိမ်ခြေမဲ့များအတွက် ရေမီးဒဏ်ခံနုိုင်တဲ့အိပ်ယာကို ၁၅နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတီထွင်
1:45 PM အင်တာနက်သတင်းများ No comments
အိမ်ခြေယာမဲ့များအတွက် ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးက ရေမီးအာမခံနိုင်တဲ့အပြင်
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်တဲ့ အိပ်ယာတစ်မျိုးကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ Emily Duffy အမည်ရပြီး အသက်(15)နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ကောင်မလေးဟာ သူမတီထွင်ထားတဲ့ အိပ်ယာကို အိမ်
ခြေယာမဲ့များအတွက် ရည်ရွယ်တီထွင်လိုက်တာလို့ ဖွင့်ဟခဲ့ပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းအတွက်လည်း
ရံပုံငွေတွေ မြင့်တက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူမဟာ အဲဒီလို ရံပုံငွေမြင့်တက်ဖို့အတွက်လည်း ဒပ်ဗလင်မြို့ရဲ့ Limerick လမ်းမပေါ်မှာ တစ်နေ
ကုန် လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမတီထွင်လိုက်တဲ့ အိပ်ယာဟာ မီးလောင်မှု
ကို အာမခံနိုင်တဲ့ အလွှာနှစ်ခုကို ထပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့က အိပ်စက်သူကို မီးလောင်ခြင်းမှ
ကင်းဝေစေသလို၊ ရေစိုခြင်းကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
အိပ်ယာမှာ ရောင်ပြန်ကို သုံးထားတာကြောင့် အလွယ်တကူ မြင်နိုင်ပြီး ကားပါကင်နဲ့ တံခါးဝ
ကဲ့သို့နေရာများမှာ အိပ်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ နိုင်လွန်ကပ်စေးနည်းကပ်ခွာကို သုံးထားတာကြောင့်လည်း
သုံးစွဲသူအဖို့ အိပ်ယာထဲကို အလွယ်တစ်ကူ ၀င်လွယ် ထွက်လွယ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ တီထွင်မှုကို
ဂျာနယ်နဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေက ချီးကျူးခဲ့ကြပြီး “save lives on the streets of Dublin”
(ဒပ်ဗလင်လမ်းမပေါ်က အသက်ကယ်မွေ့ယာ)လို့တောင် တင်စားခဲ့ကြသလို ချစ်စနိုးနဲ့လည်း
‘Duffily Bags’ လို့ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ အိပ်ယာကို အိမ်ခြေယာမဲ့များထံမှာ
အလွယ်တကူ ပေးအပ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲ အဲဒီအိမ်ခြေယာမဲ့တွေဟာ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ
လုပ်ပေးရာဖြစ်ပြီး ရလာတဲ့ လုပ်ခကို အိပ်ယာအတွက် ပေးချေရမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ အသောက်သမားတွေအတွက် ပြန်လည်ထူ
ထောင်ပေးရာရောက်ပြီး ပြည်သူ့အကျိုးကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ သယ်ပိုးရာရောက်နိုင်တဲ့ အစီစဉ်
ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒပ်ဗလင်မှာရှိတဲ့ Mendicity Institute မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
Julian Judge က “မင်းအကောင်းထည်ဖော်ခဲ့တဲ့ အကြံအစည်ဟာ မင်းအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ
အချို့ပါဘဲ …. ဒါ့အပြင် မင်းဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို စမ်းသပ်တီထွင်နိုင်ခြင်းအတွက်တော့ ဂုဏ်ယူ
စရာအစစ်အမှန်ပါဘဲ ” လို့ ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
သင်မသိသေးတဲ့ Orgasm အကြောင်း (၉ )ချက်
1:30 PM 18+ No comments
ရူပဗေဒ ဖြစ်စဉ်အရ လူတစ်ယောက်ဟာ Orgasm (ကာမဆန္ဒပြီးမြောက်ခြင်း) ရတဲ့အခါမှာ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်လာပြီး အသက်ရှုတာလည်း ပိုမြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Orgasm ကြောင့် ဒီအရာတွေပဲ ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Orgasm အကြောင်းကို လူတိုင်းသိချင်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း July 31 ကို National Orgasm Day အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Orgasm ဖြစ်တဲ့အခါ ဘာတွေ ဖြစ်လဲ ဆိုတာကိုတော့ လူတော် တော်များများ မသိကြပါဘူး။ (၁) Orgasm များများရတဲ့သူဟာ ပိုမိုနုပျိုပါတယ်။ ရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဖြစ်လဲ Royal Edinburgh ဆေးရုံကြီးရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ Dr. David Weeksဟာ လူပေါင်း၃၅၀၀ ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာမှာ Orgasm ပိုမိုရရှိသူတွေဟာ ပိုပြီးနုပျိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ (၂) သဘာဝကပေးထားတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့တဲ့ အကောင်းဆုံးအရာ လူတစ်ယောက်ဟာ Orgasm ရတဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ hypothalamusလို့ခေါ်တဲ့ အပိုင်းထဲကနေ Oxytocinဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းကို သွေးကြောထဲကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ Love Molecule လို့လည်း အချို့က တင်စားခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းဟာ လူတွေကိုနွေးထွေးမှုကို ခံးစားရစေပြီး အကောင်းမြင်ခြင်း၊ နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းတွေကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းသွေးထဲမှာ မြင့်ခြင်းဟာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်းတွေကိုတောင် လျော့ကျစေပါတယ်။ (၃) အိပ်မပျော်ခြင်းကိုလျော့ကျစေတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုအပြီးမှာ အိပ်ချင်လာတဲ့စိတ်ဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာထက် အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်ပိုများပါတယ်။ တကယ်တော့ ၂ယောက်လုံးရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ Oxytocin နဲ့ Vasopressin တို့လို ဓာတုဓာတ်တွေထွက်လာတတ် ပါတယ်။ ဒီဓာတုဓာတ်ပေါင်းတွေဟာ အိပ်စက်ခြင်းကို အကူအညီပေးတဲ့ Melatonin နဲ့ ဆက်နွယ်နေတာကြောင့် ပိုမိုပြီး အိပ်ပျော်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ (၄) Birthgasms ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေမှာ တကယ်ရှိပါတယ်။ Birthgasm ဆိုတာကတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကလေးမွေးဖွားချိန်မှာ Orgasm ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး မီးဖွားခြင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးလှုပ်ရှားသူDebra Pscali-Bonaro က ခွန်အားသုံးရခြင်းက လိင်မှုဆိုင်ရာ အာရုံကြော တွေကိုလည်း လှုံ့ဆော်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (၅) Orgasm ရဖို့ ကမ္ဘာ့အကြာဆုံး Masturbation(အာသာဖြေဖျောက်ခြင်း)လုပ်ချိန် Masturbation လုပ်ခြင်းဖြင့် Orgasm ရဖို့ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ကြာချိန်ကတော့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် 6နာရီနဲ့ ၃၀မိနစ်ဖြစ်ပြီး ယောင်္ကျားတစ်ဦးအတွက်တော့ ၈နာရီနဲ့ ၃၀မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို အထောက်အကူပစ္စည်း တွေကို အသုံးပြုခဲ့လဲ ဆိုတာတော့ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ (၆) အချို့အမျိုးသမီးတွေ အတွက် Orgasm ကသေစေနိုင်တယ်။ အလွန်နည်းပါးသော အမျိုးသမီးဦးရေ အတွက်တော့ Orgasm ရရှိချိန်မှာ သတိမေ့မျောပြီး နှလုံးရပ်တန့်ကာ သေဆုံးခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ (၇) Coregasms ဆိုတာ တကယ်ရှိတယ်။ Coregasm ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နေရင်း Orgasm ၇တာမျိုးကို ခေါ်တာပါ။ A coregasm is an exercise-induced orgasm, most widely reported to occur during core work. AlfredKinsey ဆိုတဲ့ Sexologist တစ်ယောက်ရဲ့ အဆိုအရတော့ သူစစ်တမ်းကောက်ခဲ့သမျှအမျိုးသမီးများ ရဲ့ ၅%ဟာကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း Orgasm ရကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (၈) Sex နှင့် Orgasm က အသက်ရှည်စေတယ်။ ဗြိတိန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်တစ်စောင်ရဲ့ အဆိုအရ အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ Orgasm ကြားမှာ ဆက်နွယ်မှုရှိတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး ၂ကြိမ်ခန့် Orgasm ရရှိသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့သက်တမ်းထက် ၈နှစ်ပိုပြီး အသက် ရှည်နုိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Orgasm က နုပျိုစေရုံတင်မကပါဘူး။ အသက်ရှည်အောင်လည်း ကူညီပေးပါတယ်။ (၉ ) ပုံမှန်အားဖြင့် ကြာချိန် 0.8 Sec ရှိတယ်။ စုံတွဲအများစုဟာ orgasm ကိုပြိုင်တူရလေ့မရှိပါဘူး။ စစ်တမ်းတွေ အရ၆၉ %သော အမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံမှုအတွင်းမှာOrgasm ကိုရလေ့မရှိပါဘူး။ ၇၅% သော အမျိုးသားတွေကတော့ ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရောရဲ့ Orgasm ကြာချိန်ဟာ ပျမ်းမျှ 0.8 Sec ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှဆုံးအမျိုးသမီး (၁၀)ဦး
1:27 PM အင်တာနက်သတင်းများ No comments
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အလှဆုံး အမျိုးသမီး (၁၀)ယောက်ဟာ ဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ? အောက်မှာ တော့ ကောက်ကြောင့်အလှဆုံး အမျိုးသမီး (၁၀)ယောက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁)Kelly Brook Kelly Brooke ဟာ သူမရဲ့ အမတွေလိုပါပဲ ခန္ဓာကိုယ်လှပါတယ်။ သူမဟာ အင်္ဂလန်သူ မော်ဒယ်တစ် ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Amber Rose Amber Rose ကတော့ အမေရိကန်သူ မော်ဒယ် ၊ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်နာ၊နဲ့ မင်းသမီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Iggy Azalea Iggy Azalea ကတော့ Australia နိုင်ငံသူ ရပ်ပါတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ၊တေးရေး၊ မော်ဒယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) Jennifer Love Hewitt Jennifer Love Hewitt ကတော့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမေရိကန် မင်းသမီး၊ ထုတ်လုပ်သူ၊စာရေးဆရာ၊ တယ်လီဗီရှင်း ဒါရိုက်တာ၊ တေးရေးဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ The Client List ဆိုတဲ့ TV show ကအထူးပဲအောင်မြင်ပါတယ်။
(၅) Tyra Banks Tyra Banksကတော့ နာမည်ကြီး အမေရိကန်မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးကို ၁၉ နှစ် မတိုင်ခင်က မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉ နှစ်နောက်ပိုင်းမှ ဒီလိုလှပတဲ့ ဘော်ဒီကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
(၆) Kim Kardashian Kim Kardashian ကတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်အောင် နာမည်ကြီးတဲ့ Reality Show Star တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) Salma Hayek Salma Hayekကတော့ မက်ဆီကန်မင်းသမီးဖြစ်ပြီး အသက်၄၉ နှစ်ရှိနေပေမယ့် အခုအချိန်အထိလှ နေတုန်းပါပဲ။
(၈) Jennifer Lopez J-Lo လို့လည်း ပရိတ်သတ်တွေက ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ သူမကတော့ အမေရိကန် အဆိုတော်၊ မင်းသမီး တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။အသက်၄၆နှစ်ပေမယ့် အခုအချိန်ထိ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းထား နုိုင်တုန်းပါပဲ။
(၉ ) Scarlett Johansson သူမကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ Sexy အဖြစ်ဆုံးမင်းသမီးထဲမှာပါဝင်တဲ့ နာမည်ကျော် အမေရိကန် မင်းသမီး ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက် ၃၁နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
(၁၀) ဘီယွန်းစေး ဘီယွန်စေးကလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အလှဆုံးထဲမှာ ပါပါတယ်။ သူကတော့ အရင်တုန်းက ဖက်တီးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ။
Credit :MOM Source: fittips4life
အစွန်းရောက်လုပ်ရပ်များတွင် ပါဝင်ရန် စီစဉ်နေသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား ၂၇ ဦးကို စင်ကာပူဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့
8:14 PM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
စင်ကာပူ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ။ ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအပါအ၀င် အခြားနိုင်ငံများရှိ အစွန်းရောက်လုပ်ရပ်များတွင် ပါဝင်ရန် စီစဉ်နေပြီး စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား အမျိုးသား ၂၇ ဦးကို စင်ကာပူပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဋ္ဌာနက ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ စင်ကာပူတွင်မူ အကြမ်းဖက်မှုများပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းမရှိဟု အာဏာပိုင်များက ပြောသည်။
အဆိုပါ ၂၇ ဦးကို ၂၀၁၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၆နှင့် ဒီဇင်ဘာ ၁ ကြားက ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအက်ဥပဒေအရ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက ဇန်န၀ါရီ ၂၀တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တစ်ယောက်မှလွဲ၍ အားလုံးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ပြန်ပို့လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မှာမူ စင်ကာပူမှ တရားမ၀င်ထွက်ခွာရန် ကြိုးစားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံပြီးမှ ပြန်ပို့ရန် စီစဉ်ထားသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများအနက် ၂၆ ဦးမှာ အယ်လ်ခိုင်ဒါနှင့် အိုင်အက်စ်တို့ကဲ့သို့ လက်နက်ကိုင်ဂျီဟတ်သဘောတရားရေးကို ထောက်ခံသည့် ဘာသာရေးလေ့လာသည့်အုပ်စုတစ်ခုမှ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက ဆိုသည်။
ကျန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားမှာ ယင်းအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သော်လည်း အစွန်းရောက်ဖြစ်လာမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ထဲတွင် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်ဆိုသည်။ ထို့အပြင် ၄င်းသည် အစွန်းရောက် ဘာသာရေးဆရာများကို ထောက်ခံသည့်အပြင် ဂျီဟတ်နှင့် ပတ်သက်သည့်အရာများပိုင်ဆိုင်နေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ပြည်ထဲရေးဋ္ဌာနက ဆိုသည်။
အပြာရောင်မင်းသမီးရဲ့ ရင်ထဲက မင်းသား
8:12 PM နိုင်ငံတကာအနုပညာရပ်ဝန်း No comments
ဧပရယ်ကာရိုလီနာဆိုတာ စပိန်နိုင်ငံက နာမည်ကြီး အပြာရောင်မင်းသမီးတစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်ကတည်းက အပြာရောင်မင်းသမီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ကာရိုလီနာဟာ အသက် ၂၃ နှစ်သာရှိသေးပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ဆုကို ရရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကို အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ အိပ်ယာပေါ်မှာ အတူအနေချင်ဆုံးပုရိသက ဘယ်သူလဲလို့ မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ဘာစီလိုနာနဲ့စပိန်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် အင်နီယေစတာလို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
စပိန်အသင်းကမ္ဘာ့ဖလားရရှိခဲ့ရာမှာ ဟောလန်အသင်းဘက်ကို အနိုင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးနောက် သေဆုံးသွားတဲ့သူငယ်ချင်းဂျာကေးအတွက် အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ အင်နီယေစတာကို ကာရိုလီနာကြွေသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 'အင်နီယေစတာကို အိပ်ယာပေါ်ခေါ်ပြီး ချစ်တင်းနှောချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအကြောင်းတွေကို သူသိမှာ မဟုတ်ပါဘူး' လို့ ကာရိုလီနာက ဆိုခဲ့ပါတယ်။
12:00 PM အလှအပရေးရာ No comments
ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ရတာမျိုး မဟုတ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ပေါင်တံနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို လှပစေပါလိမ့်မယ်။
Source & Photo : Elitedaily
ဒုတိယ မိုးဟေကို လက်သစ်ဆိုပြီး Lotion လိမ်းတဲ့ ဗီဒီယို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် နန်းမြင့်မိုရ်
11:00 AM 18+ No comments
ဒုတိယ မိုးဟေကို လက်သစ်ဆိုပြီး Lotion လိမ်းတဲ့ ဗီဒီယို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် နန်းမြင့်မိုရ် ဗီဒီယို ဖိုင်ကိုတော့ အများသူငှာကြည့်ရှုရန်မသင့်သောကြောင့် တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ကျမတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ ပြဿနာတစ်ခု တက်နေပါတယ်ရှင့်။ ကျမက အခုအသက် ၂၃ နှစ်ရှိပါပြီရှင့်။ ကျမတို့ မိန်းကလေး သဘာဝအရ ယောက်ျားလေးနဲ့ စပြီး ...
ဒုတိယ မိုးဟေကို လက်သစ်ဆိုပြီး Lotion လိမ်းတဲ့ ဗီဒီယို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့န...
လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ဖြင့် မြွေတစ်ကောင်က ခါးလယ်မှဖြတ်ကာ တစ်ဆင့်ချင်း တစ်ရစ်ချင်းတက်လာနေသလို ခံ စားရသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မှိန်ပြပြမီးရောင် အောက်တွင် သု...
မလိုချင်ဘဲ ကိုယ်ဝန် မရအောင် သန္ဓေ တားနည်းများ
သန္ဓေတားခြင်း နည်းလမ်းပေါင်း များစွာရှိပါသည်။ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် သန္ဓေတားမည်ကို ဆုံးဖြတ်သော အခါ မိမိ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ လိင်ဆက်ဆံသည့်...
လုလုအောင် ရဲ့ အလန်းဓာတ်ပုံတွေစုစည်းမှုလေးပါ
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အဝေးမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေစဉ် ယောက္ခထီး ဖြစ်သူက မုဒိန်းကျင့်၍ ကိုယ်ဝန်ရသွားသော မိန်းကလေး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Uttar Pradesh တွင် တည်ရှိသော Muzaffarnagar မှ အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးအား သူမ၏ ယောက္ခထီးက သူမခင်ပွန်း အဝေ...
တာချီလိတ်မြို့ ဝမ်ကောင်းရပ် ကချင်ရွာ ရေကြီး၍် ကယ်ဆယ်ရေးများပြုလုပ်
Snapchat သုံးသူများ၏ မပေါ်တပေါ် ပုံများ အွန်လိုင်းမှာ ပေါက်ကြားလာ
အွန်လိုင်း ဓာတ်ပုံ ရှယ်ယာ လုပ်နိုင်သော လူသုံးများ အပလီကေးရှင်း Snapchat သုံး သူအချင်းချင်း ပေးပို့ထား ကြသော မပေါ်တပေါ်ပုံများ ခိုးယူခံရကာ အ...
Burmese Today သတင်းနှင့်နည်းပညာဆိုဒ်လေးကို ဝေဖန်အကြံပြု ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါက BurmeseToday25@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Copyright © 2013 Burmese Today | Powered by Blogger